सम्बन्धमा शारीरिक सम्पर्क किन महत्वपूर्ण छ ? « Mero LifeStyle
साफको उपाधि जित्न यस्तो हुनुपर्छ नेपालको रणनीति:राजुकाजी शाक्य
यी हुन् शरीरमा दुबी आउनुको कारण, के छ यसको उपचार…
दसैं अनुभव : टीकाको दिन साह्रै रिस उठ्थ्यो
आज कहाँ कहाँ पानी पर्छ ?
यस्तो छ दसैंको टीका, जमरा, दक्षिणा र आशिर्वादको महत्व
सुरक्षित दसैंको शुभकामना ।
सम्बन्धमा शारीरिक सम्पर्क किन महत्वपूर्ण छ ?
मेरो लाइफस्टाइल	|| 27 June, 2021
यौन सम्बन्ध केवल रमाईलोको लागि मात्र होइन । केहीले यौन इच्छालाई केवल वासनामै सिमित राख्छन् । तर यो एकदमै गलत हो । सेक्सले सम्बन्ध सुधार गर्न धेरै मद्दत गर्छ । सम्बन्धमा सेक्स किन महत्वपूर्ण छ ? यस्ता छन् यसबारेका केही जानकारीः
सेक्सले स्वास्थ्यमा फाइदा पु-याउँछ । यसले पाचन प्रक्रिया र प्रतिरक्षा बूस्टरको रूपमा काम गर्दछ । सेक्सले तपाईलाई जवान बनाउँछ । यौन सम्बन्ध राखेर, तपाईंको शरीर सक्रिय हुन्छ, जसका कारण तपाईं फिट हुनुहुनेछ । सेक्सले तपाई र तपाईको पार्टनरलाई स्वस्थ मात्र बनाउँदैन, तपाईको सम्बन्धलाई पनि स्वस्थ बनाउँछ ।
भावनात्मक सम्बन्ध बलियो बनाउँछ
यौनले तपाईलाई पार्टनरको शारीरिक रुपमा मात्र नभई भावनात्मक रुपमा पनि नजिक ल्याउँछ । यसले सम्बन्ध बलियो र राम्रो बनाउँछ । कुनै पनि जोडीको यौन जीवन उनीहरू बीचको भरोसाको प्रतिक हो ।
आजको व्यस्त जीवनमा, धेरै दम्पत्तीहरूले एक अर्काको लागि समय पाउँदैनन्, जसको कारणले सम्बन्धमा दूरी बढ्न थाल्छ । एक अनुसन्धानका अनुसार, सेक्सको बेला तपाईलाई तनावमुक्त महशुस गराउँदछ ।
रोमान्सलाई कायम राख्छ
यौनले जोडीहरू बीच रोमान्स कायम राख्न मद्दत गर्छ । सेक्सले शरीरमा अक्सीटोसिन निकाल्छ । यसलाई प्रेम हर्मोन पनि भनिन्छ, जसले दम्पत्तीको बीच रोमान्टिक सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत गर्दछ । यो अधिकांश देखिएको छ कि सेक्सको अभाव हुने सम्बन्ध एकदम चाँडो फुट्छ वा दम्पत्तीहरुको बीचमा डिभोर्स हुन्छ ।
हर्मोनहरु सन्तुलन गर्छ
यौनले तनाव हटाउनुका साथसाथै हार्मोनहरूलाई सन्तुलनमा राख्दछ । हार्मोनल सन्तुलन कायम गर्नाले अन्य मानसिक समस्याहरू निको पार्न मद्दत गर्दछ र तपाईंको मुड राम्रो हुन्छ । यसले प्रजनन क्षमता पनि बढाउँदछ । सम्बन्धमा सेक्सको बारेमा प्रत्येक जोडीको आफ्नै धारणा हुन्छ, केही व्यक्तिहरूका अनुसार सम्बन्धमा सेक्स आवश्यक हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
महीनावारीको बेला सेक्स गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् !
पहिलो शारीरिक सम्बन्ध कुन उमेर समूहमा धेरै हुन्छ ?
घरमै यसरी बढाउनुस् सेक्स पावर !
सेक्सका लागि सबैभन्दा राम्रो र नराम्रो समय कुन हो र किन ?
सेक्सले महिलाको सौन्दर्यता यसरी बढाउँछ
पहिलो यौनसम्पर्कपछि महिलामा देखिन्छन् यस्ता शारीरिक समस्या
यी ६ तरीकाले यौन सम्बन्धलाई सहज बनाउनुस्
यस कारण महिलाको यौनेच्छामा कमी आउँछ !
कस्ता मानिसको सेक्स लाइफ उत्कृष्ट हुन्छ ?
महिलाले सबैभन्दा धेरै पुरुषको के मन पराउँछन् ?
सेक्सको इच्छा नभए यसरी पार्टनरलाई खुशी बनाउनुस् ! « Mero LifeStyle
नेपाल साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको इतिहासमा पहिलोपटक फाइनल प्रवेश गरेको छ । माल्दिभ्समा जारी १३ औं संस्करणको उपाधिका लागि आज (शनिबार)
पछिल्लो समय भिडियोमा खोजिनेमध्येकी एक मोडल हुन्, मलिका महत । फिल्म ’यात्रा ः द म्युजिकल भ्ल्ग’मार्फत रजतपटमा डेब्यु गरेकी मलिकाले
विजयादशमीको १०औँ दिनको अवसरमा एकैसाथ लंका दहन, रावण,मेघथान र कुम्भकरणको वध गरिएको छ । राजा जनकले मिथिला राज्यको राजधानी जनकपुरधामामा शुक्रबार
यी हुन् शरीरमा दुबी आउनुको कारण, के छ यसको उपचार ?
डा. विकास पौडेल, छाला, यौन रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ छाला सौन्दर्यसँग जोडिएको प्रमुख अंग हो । छालामा लाग्ने विभिन्न रोगका
प्रवासको वेदनामा आधारित 'मुटुको टुक्रा' सार्वजनिक